Window XP အတွက် Theme များ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
24-03-2007, 05:03 AM
Windows XP 3D Desktop Theme
Last edited by tu tu; 25-02-2009 at 01:29 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Zeiya အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 39 ခုအတွက် 160 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Hey bro & sis
Do u know window xp theme down load.plz help me.
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ Cupidchan အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, kyansitthar, openeyes
Find More Posts by Cupidchan
28-04-2007, 02:20 AM
Originally Posted by CupidchanÂ®
XP Them တွေကို www.deviantart.com မှာရနိုင်ပါတယ်..
saturngod.deviantart.com မှာ အရင်တုန်းက ဇော်ဂျီ font အတွက် theme လုပ်ပေးဘူးပါတယ်...
နောက်ပိုင်း ပုဂံက ကျွန်တော့် site တစ်ခုတည်းကို ပိတ်ပစ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်း theme ထပ်မဆွဲဖြစ်တော့ဘူး...
deviantart မှာတော့ theme ကောင်းကောင်းလေးတွေရှိပါတယ်...
အသုံးပြုဖို့အတွက် Style XP လိုမယ်ထင်ပါတယ်..
မျိုးဟန်ထက်, မောင်သံသရာ, kyansitthar
Windows Xp Theme Softwares နဲ့ Themes တွေပါ။
ွှWindowsBlinds 5.50 + 102 themes
Windows 2010 Professional Theme Awesome Theme
Vista Bug Windows XP Theme Really Beautifull
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Cupidchan အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
14-05-2007, 01:28 PM
themes ဆိုရင်တော့...Icon တွေ ၊ cusor တွေ၊ start bar တွေ၊ boot skin တွေ၊ logon skin တွေ
စုံနေတာပါဘဲ...ဒါပေမယ့် သူက အမျိုးအစားတခုချင်းကို software လေးတွေ DL လုပ် ပြီးတော့မှ
လိုတဲ့ skin လေးတွေထပ်ယူ....အဲလိုပေါ့...
Last edited by လူဖုန်း; 15-05-2007 at 09:27 PM..
ပြန်စာ - Window XP ကို လှအောင်ဆင့်မယ်
crystal clear inspirat
မောင်သံသရာ, kyansitthar, linthuraaung
13-08-2008, 12:09 PM
Home Edition ကြီးပါလား ..တို့ Professional တင်ထားတော့ ...
themes တွေဘဲ ကွာတာလား..
Last edited by maJunior; 13-08-2008 at 12:10 PM..
Originally Posted by ဂျူနီယာ
Temes ဘဲပြောင်းသွာတာဘာ window အသစ်တင်စရာမလိုပါဘူး.......စိတ်ချလက်ချသုံးပါ အမ
13-08-2008, 12:37 PM
computer ကြီး ကို လေး သွား မှာလားဟင်.........
ူအဲဒီ software မျိူး တွေက computer ကို လေး စေ တက် လို.......
အ နော် computer က speed နည်း လို အ တို ကြီး ရ.......ဟီး
အတို ကြီး ဟာ လေး ကို တော ဘော ကျ လိုပါ ဗျာ........
software ကို သဘော ကျ တယ် ပြောတာ ပါ...ဟိ ဟိ...
စိတ် ဆိုး ရ ဘူး နော်...........
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ k.l.t အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by k.l.t
ဘောင်တွေကို ကြည်သွားအောင်လုပ်တဲsolfware လေးပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ မောင်တေဇာဝင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, blackNwhite, kyansitthar, linthuraaung, theinhtike
Originally Posted by k.l.t
တအားကြီးတော့မလေးဘာဘူး ......စမ်းထည့်ကြည့်ပေါ့လေးရင်လည် uninstall ပြန်လုပ်လိုက်ပေါ့.....
ပြောပြီး အတို ကြီး က ထိပ်ထိုးတယ်.........အောင့်တယ်ဗျ........ဟီး......
်နှာခေါင်း ကိ်ု ပြောတာနော်............
Originally Posted by မောင်တေဇာဝင်း
ဖိုင်မရှိဘူးလို့ ပြောနေပါတယ် တချက်လောက်ပြန်စစ်ပေးပါအုံးခင်ဗျာ
Last edited by kozaw.dagon; 13-08-2008 at 03:24 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ kozaw.dagon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အခုဖိုင်ကို ဒေါင်တာ 503 Service Temporarily Unavailable လို့ ပြောနေတယ်ခင်ဗျာ ဒေါင်းမရပါခင်ဗျာ
503 က server ခဏ maintenance လုပ်နေလို့ပါ ၊ အခုရသွားပါပြီ ။
link လဲကောင်းပါတယ် ..ဒေါင်းလို့လဲရနေပါတယ်...
ပြန်စမ်းကြည့်ပါအုံး IDM သုံးတယ်မို့လား
ပြန်စာ - Window XP ကို လှအောင်ဆင်မယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မိုးမခမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မိုးမခမင်း
15-08-2008, 02:15 AM
လင့်ကတော့ ကောင်းပါသေးတယ်။ ဒေါင်းလုဒ်မချတတ်တာ ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ သွားပြီးဖတ်လိုက်ပါ။ mind.net နဲ့ ifile.it နဲ့က ဒေါင်းလုဒ်ချနည်းခြင်း အတူတူပါပဲ။ အဆင်မပြေရင် ထပ်ပြောပါခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ PyaitSone အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ဘိုးတော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, kyansitthar, lawunyan
၀င်းဒိုး XP အတွက် ပန်ဒါပုံစံ Themes လေးပါ။ အရောင်တွေကတော့ ရဲရဲတောက်သွားတာပဲ ခင်ဗျာ ...မကြိုက်ရင် ပြန်ပြောင်းလို့ ရပါတယ်။ ဘောင်လေးတွေမှာ ကနုတ်ပန်းလေးတွေနဲ့ ကြိုက်လို့ ကျွန်တော်လည်းစမ်းတင်ကြည့်ထားတယ်ဗျ ... ကြိုက်ရင် စမ်းသုံးကြည့်ကြပါ။ရှိရင်တော့ ဆောတီးနော့
ဂျပန်စာတတ်တဲ့အကို၊အမ များ ဒီနေရာမှာ အများကြီးရှိတယ်။ ဒီထက်လည်းလှတယ်။ ဘယ်လိုချရသလဲ ပြန်သင်ပေးပါလားခင်ဗျာ....
Last edited by ဖြိုးယံလေး; 22-12-2008 at 08:24 PM.. Reason: ပေးမဲ့လင့်မေ့သွားလို့ :7:
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ ဖြိုးယံလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်စိုး, နန်းရွှေဝါ, နိုင်လင်းစိုး, အသေးလေး(4tL), မောင်သံသရာ, AZM, bothu, dusk, hanhtun, kyansitthar, new-comer^girl, sawjonnie, tu tu
ဖြိုးယံလေး အကယ်လို့ မသုံးချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကော ဘယ်လိုပြန်ပြောင်းရမလဲ ပြောပြပါဦး
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ သောင်းအေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, AZM, kyansitthar
Find More Posts by သောင်းအေး
29-11-2008, 02:43 PM
ကိုသောင်းအေးရေ မသုံးချင်တော့ရင် Run ထားတာကို ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပေါ့ အဆင်ပြေပါစေ....
Originally Posted by သောင်းအေး
ပြန်မဖြုတ်ချင်ဘူးဆိုရင် ...Desktop ပေါ်မှာ Right Click လေးနှိပ်၊ ပြီးတော့ Properties နှိပ်လိုက်ရင် Display Properties မှာ Themes မှာ ၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Themes ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်ယုံပါပဲ ။အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ...
မောင်သံသရာ, kyansitthar, sawjonnie
ပို့စ် 20 ခုအတွက် 32 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ kaunglaymaetuu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by kaunglaymaetuu
Originally Posted by myanaungthar
ကိုဖြိုးယံလေးတင်ပေးထားတယ်လေ။ ဒီမှာဒေါင်းလော့လုပ်ပါခင်ဗျာ။ zip ဖိုင်နဲ့ရလိမ့်မယ်။ ဖိုင်ကို extract ဖြေမယ်ဆိုရင် ပါတ်စ်ဝက်တောင်းလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါဆိုရင် WWW.Myanmarfamily.Org လို့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက် အိုကေသွားလိမ့်မယ်။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ breezes အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Xp ကွန်ပြူတာကို အလှဆင်ကြမယ်
အခု Cool Theme လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဂျပန်ဆိုက်တစ်ခုကရတာလာပါ။ ဂျပန်စာ နားမလည်လို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့လာရင်းသိလာခဲ့တာပါ။ (၀င်းဒိုး ၂ ခါတင်လိုက်ရပါတယ်။ ) Cool Theme က ကောင်းတာတွေရှိသလို၊ မကောင်းတာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ အသစ်အဆန်း နဲ့ လှလှပပလေးတွေကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော်လိုမျိုး အကို၊အမ တွေအတွက်တင်လိုက်ပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်က ဂျပန်ဆော့ဝဲလ်ပါ။ ဂျပန်ဖောင့်မရှိရင် စာတွေက မပေါ်ပါဘူး။ ဖောင့်ရှိရင်တော့ ပေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူး။ တစ်ခြား installer တွေလုပ်သလိုပါပဲ .. အဆင့်ဆင့်နှိပ်သွားလိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာ Desktop မှာ Shortcut လေးထွက်လာမယ်။ အဲပုံလေးက လုပ်ရမဲ့ဟာလေးတွေကို အောက်မှာရှင်းပြပါမယ်။လိုအပ်တာရှိလည်း ဆက်ဆွေးနွေးပေးပါနော်...
၀င်းဒိုး Start ကအစ အားလုံး၊ ဘောင်တွေ၊ နောက်ခံဘက်ကရောင်းပါ ကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေနဲ့ပြောင်းပေးပါတယ်။ ခြောက်မျိုးပါပါတယ်။
မောက်ပွိုင်တာလေးတွေပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပွိုင့်တာလေးကိုရွှေးချယ်ပြီး၊ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၈ မျိုးလောက်ပါ ပါတယ်။
ကွန်ပြူတာ icon လေးတွေပါ။ ပုံစံလေးမျိုး ပါ ပါတယ်။
၀င်းဒိုးစတက်တဲ့အချိန် မှာ ပေါ်လာစေချင်တဲ့ပုံလေးတွေပါ။
သူကိုရွှေးထားရင် ၀င်းဒိုးစတက်ရင် ရွှေးထားတဲ့ ပုံလေးနဲ့ ထွက်လာပါမယ်။ Microsoft Window XP တို့မပေါ်တော့ပါဘူး။ ၉ မျိုးလောက်ရှိပါတယ်။
၀င်းဒိုး Password ပေးတဲ့ ပုံစံလေးပါ။ ၂ မျိုးပဲပါ ပါတယ်။
မသိပါ။ သိတဲ့အကိုအမ များဆွေးနွေးပေးပါ။
ကိုယ့်စက်ထဲက အပေါ်ဘားမှာ ပေါ်စေချင်တဲ့ ပုံလေးတွေပါ။ သုံးမျိုးပဲရှိပါတယ်။
နံပါတ် ၁ ၂ ၃ ၈ ကတော့ ဘာပြဿာနာမှ မဖြစ်ပါ။ ကျန်တဲ့ နံပါတ် ၄ ၅ ၆ ၇ ၉ ၁၀ ကတော့ စက်ချင်းမတူရင် ပြဿာနာရှိနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လိုပေါ့ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းစက်မှာတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ စက်ကတစ်ခုပဲပြောင်းသွားပါတယ်။ စက်တက်ခြင်း အနက်ရောင် မျက်နှာပြင်နဲ့ Start Normal ...ဘာညာဆိုပြီး ရွှေးခိုင်းတာပါ။ဘာမှမနှိပ်ရင် သူဘာသာတက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က သွားပြောင်းလိုက်တာ စက်ကတက်လို့မရဖြစ်သွားပြီး၊ အသစ်ပြန်တင်လိုက်ရပါတယ်။ နံပါတ် ၁ ၂ ၃ ၈ လောက်ပဲသုံးထားရင်တော့ ဘာမှ မတက်ပါ။ ပုံမှန်းလေးပါပဲ (ကျွန်တော်ထည့်သုံးနေဆဲပါ။)
-တင်ပြီးရင်ဆော့ဝဲလ် ပြန်ဖြုတ်လို့ မရပါဘူး။ (ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တာပါ) ရခဲ့ရင်တောင် စက်ကြောင်သွားပြီး၊ ဒီဆော့ဝဲလ်နဲ့ပြောင်းထားတာတွေ တစ်ချိုး ဥပမာ Icon တွေပုံပြောင်းတယ်၊ ၀င်းဒိုးစတက်တဲ့ပုံစဲလေးကတော့ ကျန်ခဲ့တယ်။ သူကိုတင်ထားရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်ပါ။
ကျွန်တော် download ဆွဲတော့ ဂျပန်လိုလို၊တရုတ်ရုတ်လိုလိုစာတွေပေါ်လာတာ..အစ်ကို
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ kaunglaymaetuu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ ဒီလင့်ခ်က ဆော့ဝဲလ်က အင်္ဂလိပ်ဆော့ဝဲလ်ပါ ...တကယ်လို့ နားမလည်တဲ့ဘာသာစကားတွေပေၞလာရင်လည်း ရိုးရိုးတစ်ခြားဆော့ဝဲလ်တွေ အင်စောလာလုပ်သလိုမျိုးနှိပ်သွားပါ။အဆုံးသတ်ကြရင် ဒီပုံလေးပြောင်းသွားပါမယ်။ မရရင်လည်း နောက်ပုံလေးနဲ့ပြသွားပါမယ်။ ကျွန်တော်စီမှာဆိုရင် ဂျန်ပန်လိုတောင်မပေၞပါဘူး။ သူငယ်ချင်းစက်ကတော့ ဘာကြောင့်လဲမသိဘူး ဂျန်ပန်စာပေၞပါတယ်။အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ...
ဒီကိုတော့ သွားမချနဲ့နော် ...ကျွန်တော်တောင်နားမလည်ဘူး..ဂျပန်စာနားလည်ရင်တော့ သွားချပါ။ www.dzart.net